eSancharpati | बंगलादेशमा किन भयो मोदीको विरोध ? - eSancharpati बंगलादेशमा किन भयो मोदीको विरोध ? - eSancharpati
बंगलादेशमा किन भयो मोदीको विरोध ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बंगलादेश भ्रमणको विरोध गर्दै राजधानी ढाकालगायत स्थनमा हिंसात्मक झडपहरू भए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शुक्रबार, शनिबार र आइतबार भएका झडपमा कम्तीमा १३ जनाको ज्यान गएको छ ।
बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय समकक्षी मोदीको प्रशंसा गर्दै गरिबी निवारणका लागि आफ्नो दशक लामो योजनाका प्रमुख सहयोगी भएको बताउने गरेकी छन् । ‘यदि हामीले हातमा हात मिलायौं भने हाम्रा जनताको विकास निश्चित छ,’ उनको भनाइ छ ।
तर बंगलादेशी र मुस्लिम आप्रवासीलाई भारतबाट लखेट्ने नीतिअनुसार मोदी सरकारले नयाँ कानुनहरू ल्याएको हिफाजत–ए–इस्लाम लगायतका समूहको आरोप छ । राष्ट्रिय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) र नागरिक संशोधन विधेयक (सीएए) अल्पसंख्यक भारतीय मुस्लिमविरुद्ध विभेदकारी रहेको मुस्लिम संगठनहरूको आरोप छ ।
मोदीको यस पटकको बंगलादेश भ्रमण मुख्यत: स्वतन्त्रता दिवसमा केन्द्रित भए पनि यसको भारतमा भने राजनीतिक अर्थ देखिन्छ । खासगरी बंगलादेशसँग सीमा जोडिएको पश्चिम बंगालसहित केही राज्यमा शनिबारदेखि सुरु भएको चुनावमा यसले अर्थ राख्ने देखिन्छ ।
भ्रमण पूरा गरेसँगै मोदीले ट्वीट गर्दै ‘आफ्नो भ्रमणका क्रममा बंगलादेशका नागरिकले देखाएको स्नेहका लागि धन्यवाद’ समेत दिए । उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत र सुमधुर हुने उल्लेख गरे पनि भ्रमणका क्रममा भएका हिंसात्मक झडपबारे केही उल्लेख गरेनन् ।